Eros Now အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
4.1 | 10,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် XAPK（19.7MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Eros Now - Movies, Originals, Music & TV Shows
သင်၏ 2021 ကိုပျော်စရာနှင့်ဖျော်ဖြေမှုအပြည့်အဝပြုလုပ်ရန်အတွက်ယခုအခါ EROS ကိုတပ်ဆင်ပါ။ #kahaaniharrangki - ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား 33 ခုအပါအ0င်ခေါင်းစဉ်အသစ်များနှင့် 23 ခုအပါအ0င်ခေါင်းစဉ်အသစ် 46 ခုအပါအ0င်ခေါင်းစဉ်အသစ် 46 ခုအပါအဝင်ခေါင်းစဉ်အသစ်များပါ0င်သည်။
ဖျော်ဖြေရေးမိတ်ဖက်တစ်ယောက်ရှာဖွေခြင်း။ နောက်တဖန်မကြည့်ပါနှင့်! ယခုအခါ EROS သည်အွန်လိုင်းရုပ်ရှင် (13000) စာကြည့်တိုက်, မူရင်းဝက်ဘ်ရီးဝိုက်နှင့်ရုပ်ရှင်များ, တီဗွီအစီအစဉ်များနှင့် 2.5 သိန်းကျော်သည်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်ရှိသည်။ ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အဓိကအားဖြင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံ 150 တွင်ပရိသတ်များအတွက်ပရိသတ်များအတွက်ပရိသတ် 16 ဂိုးဖြင့်ပြုလုပ်သောအမျိုးအစား 16 မျိုးဖြင့် Genres တို့တွင်ပါ0င်သည်။
သင်၏ 24x7 ဖျော်ဖြေရေးမိတ်ဖက်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်
1 ။ Bollywood ၏အကောင်းဆုံး Bollywood -
bajirao mastani နှင့် Dabangg3နှင့် Diby အလှူရှင်တို့ကဲ့သို့သော Rebo-tick-tick-tickling comeeds 3, Picky အလှူရှင်3ဦး ၏စာကြည့်တိုက်သည်ခေါင်းစဉ် 13000 ဖြစ်သည် အိန္ဒိယတွင်အကြီးမားဆုံး Bollywood Movie Collection ။
သောကြာနေ့ညတွင်ဖျော်ဖြေမှုအချို့လိုအပ်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ #horror စုဆောင်းမှုတွင် Play ကိုနှိပ်ပါ။ လှုံ့ဆော်မှုရှာဖွေနေ? မင်းနောက်ကျောရှိတယ် Mukkabaaz နှင့်အင်္ဂလိပ်စာရှုလ်ကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်များ။ ကောလိပ်ပျောက်ဆုံးနေပါသလား 90 ပြည့်လွန်နှစ်များ, '70 နှင့်' 60 ပြည့်လွန်နှစ်များမှကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်သော retro စုဆောင်းမှုနှင့်အတူ Memory Lane သို့ပြန်သွားပါ။
2 ။ ဘာသာစကား No Bar:
ဘာသာစကားတစ်ခုတည်းထက်ကျော်လွန်လေ့လာရန်ရှာဖွေနေပါသလား။ Eros သည်တစ်ကိုယ်ရေဖျော်ဖြေမှုအက်ပ်တစ်ခုတည်းတွင်ပေါင်းစပ်ထားသောတမီးလ်, ဘင်္ဂါလီ, မာရသီနှင့်ပန်စီဘာသာစကားအပါအ0င်ဘာသာစကားများကိုမတူကွဲပြားသောရုပ်ရှင်များကိုတင်ပြသည်။ Bajirao Mastani နှင့် Devdani တို့ကဲ့သို့သော Bajirao Mastani နှင့် Devdas တို့ကဲ့သို့သော Bajirao Mastani နှင့် Devdas တို့အားရုရှား, ပိုလန်နှင့်ဆွာဟီလီအပါအ0င်ဘာသာစကားများကိုတင်ပြရန်အတွက်လည်းကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်။
3 ။ ယခုအခါ EROS ယခုမူရင်း:
EROS ယခုအဆင့်မြင့်0က်ဘ်ဆိုက်များမှအစဉ်အဆက်တိုးချဲ့နေသောစာကြည့်တိုက်သည်သင့်မြင်ကွင်းသို့ကပ်ထားလိမ့်မည်။ အသား, လှန်ခြင်းနှင့်မီးခိုးကဲ့သို့သော gritty, Metro Park နှင့် Side Hero သို့မဟုတ် Side Hero သို့မဟုတ် Side Hero သို့မဟုတ် Modi - Modi - ဘုံလူ၏ခရီးဆောင်ခြင်းစသည့် Metro Park သို့မဟုတ် Inspiration Myanmar စီးရီးများစသည်တို့ဖြစ်သည်။
4 ။ Eros ယခုမြန်မြန်ဆန်ဆန်:
အချိန်မီအပြေး? မပူပါနဲ့။ Go တွင်ရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီး၏ Quickie ဗားရှင်းကိုကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးပူနွေးသောရုပ်ရှင်ကားများကို SoulSathi နှင့် Monalson နှင့် Mainsathats နှင့်မုတ်သုန်ရာသီကဲ့သို့သောအ0တ်အထည်များသို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်မင်္ဂလာဆောင်နှင့် Metro Park ကဲ့သို့သော Locknine Edition ကဲ့သို့သော Locknine Edition ကဲ့သို့သော Locknine Edition ကဲ့သို့သော Locknine Edition ကဲ့သို့သော Locknine Edition ကိုနှိပ်ပါ။
5 ။ Eros Music:
ရှည်လျားသောတစ်နေ့တာပြီးနောက်တစ်နေ့တာကြာပြီးနောက်တစ်နေ့တွင် Unwind သည်သင်၏အရသာနှင့်ခံစားချက်နှင့်ကိုက်ညီသော playlistists များသို့ကုသပေးသည်။ AR Rahman, Sonu Nigam, Sunidhi Chauhan, Mohit Chauhan စသည့်တေးဂီတလက်ကိုင်ပညာရှင်များမှအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ထိပ်တန်းလက်များကိုနားထောင်ပါ။ Mohit Chaohan မှ tune အသစ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
7 ။ အမြဲတမ်းအသုံးပြုသူပထမ ဦး စွာ!
built-in ရှာဖွေရေးဘောင်ကွက်များ, Navigation Tabs နှင့် Gene-General Selections Eroos Now တစ်ခုသည်လေ့လာရန်လွယ်ကူသည့် interface တစ်ခုဖြစ်သည်။ အနှစ်တစ်ထောင်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးရိုးဗိုလ်ချုပ်ကြီး X ကိုစစ်မှုထမ်းဟောင်းများအနေဖြင့် eros ယခု app နှင့်အတူ eros app နှင့်အတူ app, form ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်စီးရီး၏ဖျော်ဖြေရေးသည်တစ် ဦး နှင့်အားလုံးအတွက်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြစ်ပါတယ်! ဒီတော့ရှေ့ဆက်သွားပါ။ EROS ယခု app ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်သောအကြောင်းအရာများကိုစတင်ရန်နှင့် Enterted Hamesha ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လှုပ်ရှားမှုများကိုစတင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လှုပ်ရှားမှုများကိုဆက်သွယ်ပါ။
သင်၏ app ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်များ, နောက်ဆုံးပေါ် Bollywood အသစ်ပြောင်းခြင်းများနှင့်သင်၏လက်ချောင်းထိပ်တွင်နာမည်ကြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရယူပါ။
ဘာအသစ်လဲ Eros Now - Movies, Originals, Music & TV Shows 4.6.2